Nidaameed wax kasta telefoonka Android la Mac
Just helay telefoonka ah Android ama kiniin oo haatan doonayaa inaan u hagaagsan Android la Mac aad doonayso music, video, sawiro, .etc? On Windows PC, wax walba waa sidaas user saaxiibtinimo oo aad u hagaagsan karaa Android la Mac si fudud u sii kordhaya aad telefoon Android ama kiniin la cable USB ah. Si kastaba ha ahaatee, wax soo si kala duwan marka soo socda si ay u Mac. Mac uusan awoodin in uu ogaado Android phone ama kiniin ah, ha u hagaagsan oo keliya telefoonka Android ama kiniin la Mac.
1. toobiye: nidaameed Android la Mac si wax walba
2. Nidaameed Faylal ay mid mid u dhexeeya Phone Android iyo Mac
2.1 nidaameed Android Xiriirada la Mac Mac by Isticmaalka Cinwaanka Book
2.2 nidaameed Android Music / Video la Mac by Isticmaalka doubleTwist
2.3 nidaameed Mac Calendar la Android by Isticmaalka iCal
2.4 nidaameed Android Photos la Mac by Isticmaalka WordPress
2.5 nidaameed Android Documents la Mac by Isticmaalka Transfer File Android
2.6 nidaameed Android Bookmarks la Mac adigoo isticmaalaya Google Account
Sida aan kor ku xusin, Mac ma ogaan karaa telefoonka Android ama kiniin. Sidaas darteed, si ay u hagaagsan wax walba oo u dhexeeya Android iyo Mac, waxaad u baahan tahay in ay taageero ka ah qalab xisbiga saddexaad barbaro. Halkan waa hagaagsan Android fududahay in la isticmaalo, waayo, Mac qalab magacaabay Wondershare TunesGo (Mac). Waxaa kuu saamaxayaa inaad u hagaagsan maktabadda Lugood in Android on Mac, oo music u hagaagsan, video, sawiro iyo dokumentiyo laga Mac in effortlessly Android.
Lugood A xirfadeed ee Android qalab si ay u caawiyaan wareejiyo maktabadda Lugood in Android effortlessly, iyo qeybsanaan.
Music nidaameed, video, sawiro iyo dokumentiyo laga Mac si ay Android by jiiday iyo tagtey
Jiid jeedi music, playlists, podcasts, bandhigyada TV oo dheeraad ah oo ka soo Lugood in Android phone si fudud.
Mid ka mid ah riix si aad u hagaagsan maktabadda Lugood in Android, iyo qeybsanaan.
Si buuxda u la jaan qaada Android 2.1 iyo ka dib.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi TunesGo (Mac)
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi qalab this on your Mac. Ka qaada cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin si Mac. Orod qalab this. Markaas, Mac idin xusuusin doonaa Lugood socda. Waxay u ordaan oo markaas Wondershare TunesGo la soo bandhigi doonaa dhinaca midigta ee Lugood, oo ku yaalla sida add-on.
Tallaabada 2. nidaameed Music, Video, Photos iyo Documents ka Mac si ay Android
On aad Mac, furo Finder iyo dedeg fayl meesha music ah, video, sawiro iyo dokumentiyada waa la badbaadiyey. On uu furmo suuqa hoose ee TunesGo, riix Jiid & dejinta tab. Markaas, jiitaa sii jeedi files uu ka rabo Mac in ay jiraan.
Tallaabada 3. nidaameed Lugood Library la Android on Mac
Riix tab nidaameed iyo sax nidaameed Android inay Lugood ama nidaameed Lugood in Android sida ay baahidaada. Markaas, riix batoonka nidaameed laga bilaabi karo habka syncing ah.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo waa la jaan qaada labada Windows iyo Mac.For Windows users, waxa kale oo aad u hagaagsan karaa Android la PC.
Mararka qaarkood, laga yaabo in aadan rabin in ay u hagaagsan wax walba oo u dhexeeya Android iyo Mac. Halkii, waxa keliya ee aad ku wareejin mid noocee ah files, sida sawirada ama playlists. Haddii taasi waxa weeye waxa aad daryeelka ku saabsan, waxaad isku dayi kartaa siyaabaha hoos ku qoran.
Heshiisyada ku yaal phone Android lagu synced karaa Mac Mac adigoo isticmaalaya Cinwaanka Book. Si loo sameeyo waxaad u baahan doontaa waafajinta xiriirada aad la leedahay account Google marka hore. Haddii aad leedahay xisaab Google lahayn, oo aad ku rakiban kartaa app Gmail telefoonka aad Android iyo abuuraan xisaab, waxaa ka. Markaas, raac tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. Open Xiriirada telefoonka aad Android. Markaas ka jaftaa badhanka dalwaddii tagay si button guriga si ay u muujiyaan menu shaashadda.
Tallaabada 2. Tubada xisaabta ku milmaan > Marge la Google . Waxay ku weydiin doonaan xaqiijin. Riix ok iyo xiriirada aad la beehsa doonaa xisaabtaada Google.
Tallaabada 3. Fur aad Kitaabka Cinwaanka aad Mac, oo markaas waa in aad rabtid ka dibna riix on Accounts meesha aad yeelan doonaan in ay On my Mac oo waxaad arki doontaa fursadaha sida sawirka hoos ku qoran.
Tallaabada 4. dooro liiska waafajinta la Google sida ku cad sawirka kor ku xusan. Markaas guji aqbal sanduuqa oo pop-up. Ka dib markii in la weydiin doonaa in aad soo gashid xisaabtaada Gmail iyo password oo aad yeelan doonaan in ay sida ugu sameeyo.
Marka aad buuxiso tallaabooyinkan si guul aad hoos ku arki doonaa shaashadda. Riix nidaameed Hadda iyo xiriirada oo dhan la heli karo aad Mac Cinwaanka Book doonaa.
Ka sokow Wondershare TunesGo (Mac), doubleTwist sidoo kale gelineya inaad u hagaagsan music video iyo telefoonka aad Android la Mac. Tutorial hoose wuxuu idin Toosiya sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi doubleTwist telefoonka aad Android .
Tallaabada 2. Ku rakib doubleTwist desktop ku saabsan Mac.
Tallaabada 3. Run doubleTwist desktop on Mac iyo xirmaan telefoonka aad Android inay Mac adigoo isticmaalaya cable USB ah.
Tallaabada 4. Riix Disk Drive iyo qalab Android loo xiri doona Mac iyo doubleTwist awood u yeelan doonaan in ay u hagaagsan music / video ah telefoonka aad Android la Mac.
Fiiro Gaar ah: Wixii qalabka qaar ka mid ah, aad ayan u arkin Disk Drive laakiin way arki doontaa Mass Kaydinta oo waxaad yeelan doontaa in ay doortaan.
Tallaabada 5. Hadda on your Mac aad arki doonaa shaashadda ah taasoo keentay in aad ogolaansho sida image hoose. Calaamadee sanduuqyada sida ku cad image ka ​​dibna riix nidaameed button. Tani waxay u hagaagsan doonaa oo heli music telefoonka aad Android ka Mac. Haddii aad doorato qalabka Import music cusub doorasho iyo sidoo, markaas .Wadashaqayntaas noqon doonaa labada dhinacba.
Sida haddii aad xulan Videos on top of image dhinaca midig oo uu sameeyo isku mid ah, ka dibna videos sidoo kale la beehsa doonaa in telefoonka aad Android.
Haddii aad synced jadwalka leh account Google iyo hadda wnat in si hagaagsan kuwaas jadwalka la Mac, waxaad sawiri kartaa taageero ka codsiga iCal.
Tallaabada 1. Open codsiga iCal aad Mac. Window A muuqan doonaa sida image hoose.
Tallaabada 2. Sida aad ka arki on image, Xagga Accounts guji dar xisaabta ah iyo sanduuqa hoose ee ku saabsan nooca xisaabta ka dooro Automatic .
Tallaabada 3. Markaas on Email Address sanduuqa ku qor cinwaankaaga xisaabta Gmail iyo Password qaybta galaan sirta Gmail.
Tallaabada 4. Markaas riix Abuur iyo iCal u hagaagsan doonaa jadwalka Android / google si toos ah. Tani waa sida aad u waafajinta kartaa jadwalka Android aad Mac.
2.4. Nidaameed Android Photos la Mac by Isticmaalka WordPress
Howlan sawiro ka Android inay Mac Mac iyo ka in ay Android waa mid aad u fudud ayaa maanta sababta oo ah adeeg bixiyayaasha kaydinta daruur. Halkan, waxaan u isticmaali doonaa WordPress sida bixiyaha kaydinta daruur adeegga. Xusuusnow in, DropBox isticmaasho hab Air-u hagaagsan, sidaa darteed waa in aad leedahay xiriir ka shaqeeya internet aad Mac iyo sidoo kale Android Phone. Uma baahnid inaad cable xogta u hagaagsan oo isticmaalaya DropBox.
Tallaabada 1. Tag DropBox website offcial iyo Saxiix account DropBox . Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo rakibi codsiga DropBox desktop .
Tallaabada 2. Tag Google Play iyo soo bixi DropBox telefoonka aad Android oo diiwaan gelin doonaan.
Tallaabada 3. Si aad u hagaagsan photos Android inay Mac, waxa aad furan kartaa Gallery iyo dooran gal ah, sida Camera. Waxaa fur iyo hubiyo photos doonayo hormariyo share icon ah.
Tallaabada 4. Tubada dar DropBox in button iyo sawirkaaga lagu dari doonaa WordPress daruur server. Markaas, ordo appliacaiton DropBox ku saabsan Mac ama la furo website-ka DropBox inay kala soo bixi doonaa sawiradii Android inay Mac.
Tallaabada 5.In si la mid ah, si ay u hagaagsan sawiro ka Mac in Android, kaliya aad u ordaan codsiga WordPress on Mac ama la furo website-ka WordPress iyo sawiro geliyaan ka Mac in WordPress daruur server. Markaas sawirada laga heli doonaa telefoonka aad Android via app DropBox.
2.5. Nidaameed Android Documents la Mac by Isticmaalka Transfer File Android
Syncing waraaqaha ee telefoonka ah Android la Mac waa mid aad u fudud oo credit aado kaydinta daruur mar kale. Waxaad si fudud u samayn karaa iyadoo la isticmaalayo DropBox, Transfer File Android, iwm Halkan waxaan qaadan Transfer File Android sida tusaale.
Tallaabada 1. Soo qaado Transfer File Android lagu rakibay on your Mac. Isticmaal cable USB aad Phone Android ee in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay Mac.
Tallaabada 2. Transfer File Open Android aad Mac. Haddii telefoonka aad Android si guul leh loo aqoonsan yahay, kaarka SD ee telefoonka aad Android ay la soo bandhigi doonaa on desktop Mac ah.
Tallaabada 3. Just nuqul ka files aad u baahan tahay ka hagaha telefoonka Android ee aad Mac. Ama waxaad nuqul karo files ka Mac si aad Android sidan sidoo.
2.6. Nidaameed Android Bookmarks la Mac adigoo isticmaalaya Google Account
Bookmarks ee telefoonka aad Android sheeg caado raadinta. Bookmarks nidaameed dhexeeya phone Android iyo Mac bixiyaan fududahay in Bookmarks ka helaan mar kasta oo aad isticmaalayso telefoonka Android ama Mac. In sidaa u hagaagsan bookmark, waxaad isticmaali kartaa Google Chrome. Raac tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. rakibi Chrome telefoonka aad Android . Isla mar ahaantaa, waa in aad la rakibi Chrome on Mac .
Tallaabada 2. Aayad in aad xisaabta Google on daalacashada chrome ee telefoonka aad Android iyo Mac ee xunbo ama gujinaya Settings > Sign In .
Tallaabada 3. Hadda Riix dar xisaabta iyo waxaa waa in aad ku qor mail aad google iyo password oo sidaas waa inaad la saxiixi doonaa Google account aad chrome browser.
Tallaabada 4. Hadda saxiixa loo siiyaa biraawsarkaaga chrome on Mac sidoo socda la mid ah nidaamka.
Tallaabada 5. Hadda bookmark Ay cusub oo aad ku dari on your browser la synced doonaa inta u dhaxaysa Mac iyo Android phone si toos ah.
A Android Alternative File Transfer Xoog
Nidaameed Android la Lugood fudayd
Bedelka Lugood Music inay Nexus 5/4/7
> Resource > Android > nidaameed wax kasta oo Phone Android la Mac